Izindaba - Kungani amazinyo ami eshintsha umbala? Udokotela wamazinyo ukutshela imbangela yokushintsha kombala kanye nendlela yokwenza amazinyo akho abe mhlophe!
Ikhithi Yokwenza Amazinyo Amhlophe
Ikhithi ye-Smart Led
Amazinyo Abamhlophe Imivimbo
Imichilo Emhlophe Eyi-5D Yamazinyo
Ilogo ye-Smilekit Charcoal Strips
Idizayini entsha ye-SmileKit Clear Strips
Amazinyo Abamhlophe Kabusha
Imikhiqizo Yokunakekelwa Komlomo Yansuku zonke
I-activated Charcoal Powder
Kungani amazinyo ami eshintshile? Udokotela wamazinyo ukutshela imbangela yokushintsha kombala kanye nendlela yokwenza amazinyo akho abe mhlophe!
Ungathola zonke izinhlobo zolwazi olumhlophe ezikhangisweni eziseceleni komgwaqo naku-inthanethi. Ngezinhlobo eziningi kangaka zamazinyo ezimhlophe, iyiphi engifanele?
Ukulungiselela ngaphambi kokuba amazinyo abe mhlophe
Ngaphambi kokuba amazinyo abe mhlophe, kufanele uqale uhlole nodokotela wakho wamazinyo ukuze uqonde imbangela yokushintsha kombala kwamazinyo, bese ungakhetha indlela efanelekile yokwenza mhlophe yokwelashwa. Ezindleleni ezihlukene zokuba mhlophe, kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi ubhekane nezinkinga zomlomo kuqala, njengokuthi: ukubola kwamazinyo angelashiwe, ukuxega okuxekethile noma okulahlekile, isifo se-periodontal… njll.
Izimbangela zokushintsha umbala kwamazinyo
Ngaphambi kokuba sifune ukwazi ukuthi singawenza kanjani amazinyo abe mhlophe, sidinga ukuqonda ukuthi yini ebangela amazinyo aphuzi futhi abe mnyama:
◎Ukudaya ukudla (njengokuphuza itiye, ikhofi, i-cola, iwayini elibomvu, ikheri)
◎Ukubhema, ukudla i-betel nut
◎ Ukusetshenziswa isikhathi eside kwe-mouthwash equkethe i-chlorhexidine
◎Njengoba ukhula, amazinyo akho aphenduka abephuzi
◎Izifo ezizalwa nazo noma ezitholakele zidala i-dysplasia yamazinyo noma ukushintsha kombala
◎Ngesikhathi sokukhula kwamazinyo, sebenzisa izidakamizwa ngenani elithile, okubangela ukushintsha kombala kwamazinyo: njenge-tetracycline
◎Ukuhlukumezeka kwamazinyo, ukubola kwamazinyo noma i-pulp necrosis
◎ Okunye ukugcwaliswa kwensimbi, amasilinda, amazinyo okufakelwa
Izinhlobo zamazinyo ezimhlophe
◎ Ukuqhunyiswa kwesihlabathi nokuba mhlophe
I-Sandblasting iwukubuyisela umbala wamazinyo ngendlela "engokomzimba". Kusetshenziswa i-sodium bicarbonate kanye nekholomu yegesi namanzi enamandla yomshini wokuqhumisa isihlabathi samazinyo, uqweqwe olungcolile nokungcola okumboze ingaphandle lamazinyo kuyasuswa, nombala wamazinyo okhona uyabuyiselwa, kodwa isizinda sezinyo asinakuba mhlophe. Ukuqhunyiswa kwesihlabathi nokuba mhlophe kungasusa “amabala angaphandle” amazinyo, njengamabala entuthu, amabala e-betel nut, amabala ekhofi, amabala etiye, njll. Nokho, ukungcoliswa kwangaphakathi akunakususwa ngokuqhunyiswa kwesihlabathi nokuba mhlophe. Kudingeka ithuthukiswe nezinye izindlela zokucwenga amazinyo.
◎Ukukhanya okubandayo/ukwenziwa mhlophe kwe-laser
Ukukhanya okubandayo okumhlophe noma ukumhlophe kwe-laser kuyindlela "yamakhemikhali" yokubuyisela umbala wamazinyo. Ngokusebenzisa ukuhlushwa okuphezulu kwama-ejenti amhlophe, ngaphansi kokusebenza kukadokotela emtholampilo, i-ejenti emhlophe ingaveza ukusabela kwe-catalytic ngokusebenzisa umthombo wokukhanya, ongafinyelela umphumela wokucwenga kwamazinyo ngesikhathi esifushane. Imithombo yokukhanya evame ukusetshenziswa ukukhanya okubandayo noma i-laser.
◎Ukwenziwa mhlophe kwekhaya
Njengoba igama liphakamisa, ivumela iziguli ukuthi zithathe amathreyi ekhaya nama-ejenti amhlophe. Ngemva isiqondiso udokotela, bangakwazi kalula ukuqedela ukwelashwa amazinyo mhlophe ekhaya. Ukwenza mhlophe kwasekhaya kusebenzisa izindlela “zamakhemikhali” ukwenza amazinyo abe mhlophe. Okokuqala, udokotela wenza umbono emtholampilo ukwenza ithreyi yamazinyo eyenziwe ngokwezifiso, ukuze inamathele eduze kobuso bezinyo, ukuze i-ejenti emhlophe inamathele kakhulu ebusweni bezinyo, ukuze i-ejenti ibe umphumela omhlophe ongcono. Isiguli sibeka i-ejenti emhlophe ethreyini yamazinyo ekhaya, bese siyigqoka sodwa.
Ukwenza mhlophe kwekhaya kusebenzisa inani eliphansi uma kuqhathaniswa lokukhanya okubandayo/izinto ezibenza zibe mhlophe ngelaser, okunethuba eliphansi nezinga lemiphumela engemihle yokuzwela amazinyo, kodwa kuthatha isikhathi eside uma kuqhathaniswa ukuze kuzuzwe umphumela oyifunayo. Ithreyi emhlophe idinga ukugqokwa cishe amahora angama-6-8 ngosuku futhi ihlala cishe amasonto ama-4.
◎Ipheshi ye-ceramic yonke/umqhele we-ceramic (izikali)
Amapheshana e-ceramic/imiqhele yawo wonke-ceramic ayingxenye yendlela “yokumboza” yokwenza mhlophe, okuyingxenye yesigaba samazinyo okufakelwa. Ukuze wenze lolu hlobo lwamazinyo okufakelwa, kuyadingeka "ukugaya ungqimba ebusweni bezinyo", bese usebenzisa i-patch yonke-ceramic noma umqhele we-ceramic nge-adhesive high-stretch ukuze unamathele ebusweni bezinyo. izinyo. Le ndlela ingathuthukisa isimo sezinyo nombala ngesikhathi esifanayo.
Izinzuzo amazinyo mhlophe
Uma amazinyo esemhlophe, abantu bazobukeka bebasha, benempilo, futhi beqiniseka ngokwengeziwe. Ngemva kokuqhunyiswa kwesihlabathi nokuba mhlophe kukhishwe intuthu nesikali se-betel nut ebusweni bamazinyo, kungase futhi kuthuthukise iphunga elibi elibangelwa yilokhu kungcola. Iziguli ezazinomkhuba wokuhlafuna i-betel nut nsuku zonke, ngemva kokuba amazinyo emhlophe, ngaphezu kokuzethemba kakhulu kunangaphambili, zizimisele nakakhulu ukumamatheka futhi ziwuyeke ngokushesha umkhuba omubi wokuhlafuna i-betel nut. Ngemuva kokwelashwa kokwenziwa mhlophe kwamazinyo, uma ukwazi ukuhambisana nemikhuba yokuhlanza engcono kanye nokuvakasha okuvamile, kungase futhi kususe ngokuphumelelayo uqweqwe lwamazinyo futhi kuvimbele ukuvuvukala kwezinsini, ukubola kwamazinyo, i-gum atrophy, isifo se-periodontal ... nezinye izifo.
Izinyathelo zokuqapha amazinyo mhlophe
◎Ukuzwela kwamazinyo: Ezigulini ezisebenzisa “izindlela zamakhemikhali” ukuze zenze amazinyo azo abe mhlophe (njengokukhanya okubandayo/ukwenziwa mhlophe ngelaser noma ukuba mhlophe kwekhaya), zingase zibe ne-asidi yamazinyo noma zizizwele ukubanda nokushisa ngemva kokuhlinzwa. Ukuzwela kwamazinyo okubangelwa ukusebenza ngendlela efanele kungokwesikhashana futhi kungabuyiselwa ngemva kwezinsuku ezimbalwa zokuphumula. Ezigulini ezinamazinyo azwela kakhulu, ungaqala ukusebenzisa umuthi wokuxubha i-desensitization isonto elilodwa noma amabili ngaphambi kokuba ube mhlophe, futhi uqhubeke nokusebenzisa umuthi wokuxubha amazinyo ngesikhathi sokwenza mhlophe, okungavimbela kangcono futhi kuthuthukise inkinga yokuzwela kwamazinyo.
◎Nciphisa ukudla okumnyama futhi ugcine ukuhlanzeka komlomo okuhle: Ukwenziwa mhlophe kwamazinyo akwenziwa unomphela, futhi umbala wamazinyo uzolulama kancane ngemva kwesikhathi esithile. Yehlisa ukudla okumnyama, hlanza amazinyo akho ngemva kokudla kathathu, futhi uhlole njalo ukuze ugcine umphumela wokuba mhlophe kwamazinyo akho isikhathi eside.
Isikhathi sokuthumela: Aug-05-2021
Isakhiwo NO.1 , NO.2 ,NO.5 ,Gongxing High Tech Industrial Park, No.666, Yaohu West 5th Road, High Tech District, Nanchang City Jiangxi Provice, 330072, China
Ungawenza kanjani amazinyo abe mhlophe, uGigi Lai noZhong J...
Ukuqhathaniswa kwezinzuzo nokungalungi...
Kungani amazinyo ami eshintshile? Udokotela wamazinyo...
Ikhithi ye-Led yokucwenga amazinyo, Ikhithi Yokwenza Amazinyo Amhlophe, Amazinyo Amhlophe Ijeli kanye namathileyi, Ukugcwalisa Ijeli Elimhlophe Amazinyo, Ikhithi Yokwenza Amazinyo Amhlophe, I-Ismile Home Teeth Whitening Kit Gel Led Light,